एजेन्सी । विश्वमा हरेक देशहरुमा कारागार हुने गर्दछ जसमा सजाय पाएका कैदीहरुलाई राख्ने गरिन्छ । विश्वका थुपै्र कारागारहरुका आफ्नै विशेषताहरु हुने गर्दछन् । यसका साथै ती कारागारहरुलाई लिएर रोचक प्रसंगहरु पनि बाहिर आइनैरहन्छन् । यसै सन्दर्भमा विश्वका केही चर्चित कारागारहरुको बारेमा चर्चा गरौँ ।
१. रोबिन आइल्यान्ड
दक्षिण अफ्रीकाको राजधानी केपटाउनको समुदै नजिकै रहेको यो जेलमा विश्वचर्चित व्यक्तित्वहरु नेल्सन मन्डेला र कलिमा मोटेलेन्थेलाई यही कारागारमा राखिएको थियो ।
२. टावर अफ लन्डन
सन् ११०० देखि २० शताब्दीको मध्यसम्म कारागार रहेको यो ठाउँ अहिले भने बेलायतका रानीहरुको हिरा राखिने ठाउँ र पर्यटकीय आकर्षणको रुपमा परिचित छ । तत्कालिन समयमा यस कारागारमा प्रसिद्ध व्यक्तिहरु सर थोमर मोर, किड हेनरी छैटौं र एनी बोलेन लगायत बसेका थिए ।
३. च्याटु डी इफ
फ्रान्समा रहेको यो कारागारमा सन् १६३४ देखि १९ शताब्दीको अन्त्यसम्म धार्मिक तथा राजनैतिक कैदीहरु राख्ने ठाउँको रुपमा प्रयोगमा ल्याइएको थियो । यो कारागारमा सम्पत्ति भएका धनाढ्य व्यक्तिले छुट्टै पैसा तिरेर राम्रो सुविधा उपभोग गर्न पाउँथे ।
अमेरिकामा अवस्थित यो कारागार विश्वकै सबैभन्दा कडा सुरक्षा व्यवस्था र अत्यन्तै कम सुविधा भएको कारागारको रुपमा परिचित छ । यो कारागार चट्टानै चट्टानले बनेको आइल्यान्ड वरिपरि सान्फ्रान्सिस्कोको चिसो पानीले घेरिएको छ । कुनै समय यस कारागारबाट ३६ कैदी भाग्ने प्रयास गरेका थिए तर २३ जना पक्राउ परे ६ जनालाई गोली हानेर मारियो भने २ जना पानीमा डुबेका थिए ।